Welded Wire mesh, Filter cajalid, Iron Wire, Window Window - Huiling
Anping Huiling Wire Mesh Co., ltd. waa soo saare wax soo saarka mesh silig leh in ka badan 30 sano oo taariikh ah.
Warshadu waxay daboolaysaa aag dhan 120000 m2. Haddana waxaan haysannaa qalab wax soo saar 50 nooc iyo qalab tijaabo oo tayo leh 5 nooc. Waxaan ku soo bandhigi karnaa mesh silig ah, miiraha miiraha, silig birta ah, shaashadda daaqada iyo alaabada kale ee mesh silig oo leh tiro ka badan 1500T sanadkii.
Suuqyadeenna ugu waaweyn waa: Yurub & Ameerika, Bariga-dhexe, Koonfur-bari Aasiya iyo Afrika.
Waxaan soo saarnaa oo keliya alaab sax ah oo leh tayo wanaagsan iyo qiimo tartan!
Saamaynta meelaynta qaabeynta qaab-dhismeedka muuqaalka kore ee shaashadda
Qaab dhismeedka qaabaynta shaashadda shaashadda waa la samayn karaa. Lakabyada kormeerka tayada kala duwan ayaa loo xushay dusha shaashadda. Shuruudaha dhumucda farsamaynta farsamada ee lakabka mesh qaabka ee ay bixiso kormeerka tayada kaladuwan waa isku mid ahaanshaha iyo rakibidda guud ee tayada ...
Dhibaatooyinkee ayaa ah in fiiro gaar ah loo yeesho marka la rakibayo dusha sare ee xayndaabka
Shuruudaha loogu talagalay rakibidda dusha sare ee xayndaabka waa alaabooyinka lagu soo xushay kormeer tayo leh, oo ay ku jiraan caabbinta heerkulka sare, gabowga iyo u adkeysiga daxalka. Qaabka dusha mesh waa rakibo saddex-geesood ah oo aad u wanaagsan. Qaabka iyo heerka mesh ...